iPhone တွေမှာပါနေတဲ့ LA/ZA တို့ ဆိုတာ ဘာတွေလဲ
24 Jul 2017 . 1:52 PM
iPhone အသုံးပြုနေတဲ့ လူတွေ Second Hand လောကမှာ LLA (သို့) ZA အစရှိသဖြင့် အမြဲတမ်းပြောနေတတ်ကြတဲ့အသုံးအနှုန်းတွေက ဘာတွေကိုကိုယ်စားပြုသလဲဆိုတာကို ပြောပြပေးသွားမှာပါ။ အဓိက iPhone မှာ အဲ့လိုအသုံးအနှုန်းတွေ အနေနဲ့ သတ်မှတ်ချက်တွေအများအပြားရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နားလည်ဖို့ နဲ့ အသုံးများတဲ့ နာမည်ကတော့ Carrier Name လို့ ခေါ်ပါတယ်။ LA တို့ZA တို့ ကဘာတွေလဲဘယ်လိုတွေအသုံးဝင်တာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေကဖြစ်လာပြန်ပါတယ်။ အဲ့အကြောင်းကိုမပြောခင် Apple အနေနဲ့ အဲ့လိုနာမည်တွေကို ဘာလို့ထည့်ပေးထားတယ်ဆိုတာ နဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံလေးတွေကို သိရင်ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းပါတယ်။ Apple အနေနဲ့ ဖုန်းတွေကို ထုတ်လုတ်တဲ့အခါ ဖြန့် ဖြူးတဲ့အခါမှာ Country Part တွေကို အသေးစိတ် Survey လုပ်လေ့ရှိပါတယ်။ အဓိကကတော့ Carrier လို့ ခေါ်တဲ့ဖုန်းလိုင်းတွေကြောင့်ပါပဲ။ Oversea Carrier တွေဖြစ်တဲ့ AT&T ၊ Verizon ၊ T-Mobile and Sprint တွေကြောင့် အခြား Commercial ပိုင်းတွေအရ ခွဲခြားမှုတွေဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။
သူတို့အနေနဲ့iPhone ကို Japan နိုင်ငံမျိုးအတွက် ထုတ်တဲ့အခါမျိုးမှာ Offical Unlock နဲ့Lock အလုံးတွေကို ထုတ်ပေးလေ့ရှိပါတယ်။ အခြားနိုင်ငံတွေအတွက်လဲ Offical Unlock နဲ့Lock ကိုထုတ်ပေးပါတယ်။
Offical Unlock ဆိုတာကတော့ အရိုးရှင်းဆုံးပြောရရင် ဘယ် SIM Card ထည့်ထည့်လိုင်းတက်ပါတယ်။ ဘယ်နိုင်ငံသွားသွား ဘယ်နိုင်ငံရဲ့ SIM Card ထည့်ထည့်ကို လိုင်းတက်ပါတယ်။ အဲ့တော့ Lock ကဘာလဲ။ Network Lock တွေကတော့ အများအားဖြင့်သူတို့ ထည့်ပေးလိုက်တဲ့ Original SIM Card ပဲလိုင်းတက်ပါတယ်။ အခြားဘယ် SIM Card ထည့်ထည့်မရပါဘူး။ အဲ့လို Network ပိုင်းမှာ အရှုပ်အရှင်းတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် Network Lock ၀ယ်ရမလား Offical Unlock ၀ယ်ရမလားဆိုတာကလဲမေးစရာပါ။ ဥပမာပြောရရင် US က Verizon နဲ့ Network Lock ဖုန်းဝယ်ထားရင် Verizon SIM Card နဲ့မှအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ Telcom SIM Card တွေနဲ့သုံးလို့မရပါဘူး။ အခြား Quality ပိုင်းတွေဟာဘာမှကွာ ခြားမှုမရှိပါဘူး။ ဖုန်းလိုင်း တစ်ခုပဲကွဲပြားခြားနားမှုရှိတာပါ။ Carrier Lock တွေကတော့ ပုံမှန်အားဖြင့် ဈေးနည်းပါတယ်။
Japan နိုင်ငံအလုံးတွေကတော့ အများဆုံးကျွန်တေ်ာတို့နိုင်ငံမှာအများဆုံးတွေ့ ရပါတယ်။ တနည်း JA/JP ဆိုတဲ့ Carrier Lockတွေကို တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ Official Unlock/ Lock အလုံးစစ်နည်းလေးတွေကလဲသိထားသင့်ပါတယ်။ SIM Card ပြောင်းပြီးထည့်ကြည့်လိုက်လို့ လိုင်းမတက်ရင်သေချာပါတယ် Lock အလုံးပါပဲ။ Official Unlock အနေနဲ့ကတော့ ဘာ SIM card ထည့်ထည့်လိုင်းတက်ပါတယ်။အခြား Website လင့်တွေနဲ့ စစ်လို့ရတဲ့နည်းတွေလဲရှိပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေမှာ အမှားတွေ ပဲဖော်ပြပေးတက်လွန်းလို့ ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ လုပ်လို့ရတဲ့နည်းလေးကိုပဲပြောပြပေးလိုက်ပါတယ်။ အဲ့တော့ ယေဘုယျ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအနေနဲ့Official Unlock တွေ က LL/LA/ZA အစရှိတာတွေ များပါတယ်။ အဲ့တော့ဇယားကွက်လေးနဲ့Carrier Country Part တွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
B Ireland, UK, also used for some replacement units
LL USA, Canada, also used for some replacement units
MO Macau, Hong Kong(?)
iPhone အသုံးပွုနတေဲ့ လူတှေ Second Hand လောကမှာ LLA (သို့) ZA အစရှိသဖွငျ့ အမွဲတမျးပွောနတေတျကွတဲ့အသုံးအနှုနျးတှကေ ဘာတှကေိုကိုယျစားပွုသလဲဆိုတာကို ပွောပွပေးသှားမှာပါ။ အဓိက iPhone မှာ အဲ့လိုအသုံးအနှုနျးတှေ အနနေဲ့သတျမှတျခကျြတှအေမြားအပွားရှိပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ နားလညျဖို့နဲ့အသုံးမြားတဲ့ နာမညျကတော့ Carrier Name လို့ချေါပါတယျ။ LA တို့ ZA တို့ကဘာတှလေဲဘယျလိုတှအေသုံးဝငျတာလဲဆိုတဲ့မေးခှနျးတှကေဖွဈလာပွနျပါတယျ။ အဲ့အကွောငျးကိုမပွောခငျ Apple အနနေဲ့ အဲ့လိုနာမညျတှကေို ဘာလို့ ထညျ့ပေးထားတယျဆိုတာ နဲ့အလုပျလုပျပုံလေးတှကေို သိရငျပိုပွီးစိတျဝငျစားဖို့ကောငျးပါတယျ။ Apple အနနေဲ့ ဖုနျးတှကေို ထုတျလုတျတဲ့အခါ ဖွနျ့ဖွူးတဲ့အခါမှာ Country Part တှကေို အသေးစိတျ Survey လုပျလရှေိ့ပါတယျ။ အဓိကကတော့ Carrier လို့ချေါတဲ့ဖုနျးလိုငျးတှကွေောငျ့ပါပဲ။ Oversea Carrier တှဖွေဈတဲ့ at&t ၊ Verizon ၊ T-Mobile and Sprint တှကွေောငျ့ အခွား Commercial ပိုငျးတှအေရ ခှဲခွားမှုတှဖွေဈစခေဲ့ပါတယျ။
သူတို့အနနေဲ့ iPhone ကို Japan နိုငျငံမြိုးအတှကျ ထုတျတဲ့အခါမြိုးမှာ Offical Unlock နဲ့ Lock အလုံးတှကေို ထုတျပေးလရှေိ့ပါတယျ။ အခွားနိုငျငံတှအေတှကျလဲ Offical Unlock နဲ့ Lock ကိုထုတျပေးပါတယျ။
Offical Unlock ဆိုတာကတော့ အရိုးရှငျးဆုံးပွောရရငျ ဘယျ SIM Card ထညျ့ထညျ့လိုငျးတကျပါတယျ။ ဘယျနိုငျငံသှားသှား ဘယျနိုငျငံရဲ့ SIM Card ထညျ့ထညျ့ကို လိုငျးတကျပါတယျ။ အဲ့တော့ Lock ကဘာလဲ။ Network Lock တှကေတော့ အမြားအားဖွငျ့သူတို့ ထညျ့ပေးလိုကျတဲ့ Original SIM Card ပဲလိုငျးတကျပါတယျ။ အခွားဘယျ SIM Card ထညျ့ထညျ့မရပါဘူး။ အဲ့လို Network ပိုငျးမှာ အရှုပျအရှငျးတှရှေိတဲ့အတှကျကွောငျ့ Network Lock ဝယျရမလား Offical Unlock ဝယျရမလားဆိုတာကလဲမေးစရာပါ။ ဥပမာပွောရရငျ US က Verizon နဲ့ Network Lock ဖုနျးဝယျထားရငျ Verizon SIM Card နဲ့မှအလုပျလုပျပါတယျ။ မွနျမာနိုငျငံမှာရှိတဲ့ Telcom SIM Card တှနေဲ့သုံးလို့မရပါဘူး။ အခွား Quality ပိုငျးတှဟောဘာမှကှာခွားမှုမရှိပါဘူး။ ဖုနျးလိုငျး တဈခုပဲကှဲပွားခွားနားမှုရှိတာပါ။ Carrier Lock တှကေတော့ ပုံမှနျအားဖွငျ့ ဈေးနညျးပါတယျ။
Japan နိုငျငံအလုံးတှကေတော့ အမြားဆုံးကြှနျတျောတို့နိုငျငံမှာအမြားဆုံးတှေ့ ရပါတယျ။ တနညျး JA/JP ဆိုတဲ့ Carrier Lockတှကေို တှရေ့တတျပါတယျ။ Official Unlock/ Lock အလုံးစဈနညျးလေးတှကေလဲသိထားသငျ့ပါတယျ။ SIM Card ပွောငျးပွီးထညျ့ကွညျ့လိုကျလို့လိုငျးမတကျရငျသခြောပါတယျ Lock အလုံးပါပဲ။ Official Unlock အနနေဲ့ကတော့ ဘာ SIM card ထညျ့ထညျ့လိုငျးတကျပါတယျ။အခွား Website လငျ့တှနေဲ့စဈလို့ ရတဲ့နညျးတှလေဲရှိပါတယျ။ တဈခါတဈလမှော အမှားတှေ ပဲဖျောပွပေးတကျလှနျးလို့ကိုယျတိုငျလကျတှလေု့ပျလို့ရတဲ့နညျးလေးကိုပဲပွောပွပေးလိုကျပါတယျ။ အဲ့တော့ ယဘေုယြ ကြှနျတျောတို့နိုငျငံအနနေဲ့ Official Unlock တှေ က LL/LA/ZA အစရှိတာတှေ မြားပါတယျ။ အဲ့တော့ဇယားကှကျလေးနဲ့ Carrier Country Part တှကေို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။